Degenaansho aan la isku haleyn karin oo saaka Muqdisho laga daremayo – SBC
Degenaansho aan la isku haleyn karin oo saaka Muqdisho laga daremayo
Magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa saaka laga dareemayaa xaalado degeenaansho aan cago adag ku taagneyn ka dib markii dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay maalin nimadii shalay kaas oo soo gaaray ilaa iyo xalay fiidkii hore .
Deegaanadii lagu dagaalamay sida Hodan iyo Howlwadaag ayaa saaka aan laga maqlin wax rasaas ah marka laga reebo kuwo mararka qaar qaab tijaabo ah u dhacaya waxaana halkaasi weli isku horfadhiya labadii dhinac ee dagaalamay waa Dowlada KMG ah ciidamadeeda oo ay garab siinayaan kuwa Amisom iyo kuwa Xarakada Alshabaab.
Masuuliyiin ka kala tirsan labada dhinac ee dagaalamay ayaa mar ay saxaafada la hadleen waxa ay kala sheegteen guulo iyadoo afhayeenka Xarakada alshabaab Sh Cali Dheere kulan saxaafadeed oo uu qabtay ku soo bandhigay mid ka mid ah ciidamada Amisom oo sida ay sheegeen lagu dilay dagaaladii iyo qalab kale .
Balse Sarkaal u hadlay ciidamada Amisom ayaa arintaasi been abuur ku tilmaamay isagoona sheegay in ninka ay xarakada Alshabaab so bandhigtay uu yahay shaqsi soomaali ah oo lagu sheegay Amisom askari ka tirsan .
Dagaalada oo ahaa kuwo aad iyo aad u qaraar ayaa waxaa hakad ku galay jidkii keliya ee loogu gudbayay suuqa weyn ee Bakaaraha kaas oo ilaa iyo iminka xiran waxaana jira saan saan la orankaro saacadaha sosocda waxaa qarxi kara dagaal dhexmara markale xarakada Alshabaab iyo Ciidamada DKMG ah .
Sikastaba ha ahaatee dagaaladan ayaa ah kuwo ku soo aadaya xili ay xaalad cakiran ka dhextaagantahay madaxda sar sare ee DKMG ah ee Soomaaliya iyagoona isku haya in dowlada KMG ah uu xilkii ka dhamaanayo Bisha August ee soo socota iyo in dowladu ay ku darsatay 1 sano.